How to Make $5000 Monthly Making Videos on YouTube » Somali Free courses
How to Make $5000 Monthly Making Videos on YouTube
by okhitPosted on April 18, 2022
Haddii aad xiisaynayso sida lacag looga sameeyo YouTube, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa wax ku saabsan suuqgeynta xiriirka la leh iyo sida loo abuuro muuqaal gaaban oo dhiirigelinaya. Waxa kale oo aad lacag ku samayn kartaa adiga oo isticmaalaya sawirada saamiyada sida qalab xayeysiis ah. Iyo, dabcan, haddii aad xiiseyso mawduuca, waxaad xitaa samayn kartaa lacag adoo siinaya fiidiyowyo dhiirigelin ah taageerayaashaada.
Suuqgeynta affiliate waa habka ugu wanaagsan ee lagu kasbado YouTube
Iyadoo la abuurayo fiidiyow ku saabsan mawduuc dhiirigelin ah waa hab wanaagsan oo lagu soo saaro taraafikada boggaaga, waa inaad sidoo kale tixgelisaa ka-faa’iidaysiga iyada oo loo marayo suuq-geynta xiriirka la leh. Si ka duwan qoraalada la kafaalo qaado, suuqgeynta xiriirka la leh waxaa lagu sameyn karaa si fudud. Ilaa iyo inta aad u dhexgelinayso alaabtaada si aan kala go ‘lahayn, daawadayaashaadu ma mari doonaan dhowr tillaabo ka hor inta aysan iibsan alaabta. Barnaamijyada xiriirka la leh waxay kaa caawinayaan inaad kor u qaaddo alaabooyinka tayada leh YouTube-ka. Isticmaalka magacaaga summada ama kor u qaadida alaabtaada iyada oo aan la helin barnaamij xiriir la leh waxay noqon kartaa dab.
Si aad u kasbato YouTube, waa inaad doorataa mawduuc la xidhiidha nichegaaga. Fiidiyowyada ugu fiican waxaa ku jiri doona macluumaadka ku saabsan dhageystayaasha la beegsanayo iyo baahidooda. Adeegso astaanta liiska-ciyaaraha YouTube si aad u ururiso fiidiyowyo la mid ah. Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo jiidato daawadayaal badan oo aad sare u qaaddo fursadaha fiidiyowyadaada lagu arko natiijooyinka raadinta. Hubi in fiidiyowyadaadu ay u habeeyeen makiinadaha raadinta. Sidoo kale, iska hubi inaad ku darto xiriirinta barnaamijyada xiriirkaaga sharaxaadda iyo cinwaanka fiidiyowga.
Haddii aad leedahay kanaal yar, waxaa laga yaabaa inaadan lacag badan ka samayn kafaalaqaadyada lacag bixinta ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad gaadho kun macaamiil, waxa laga yaabaa inaad bilowdo inaad lacag ka hesho macluumaadka la kafilo. Ku soo noqoshada ku sheegidda badeecadooda fiidyahaaga, waxaad heli doontaa komishannada summadaha. In kasta oo tani ay u ekaan karto mid adag in la gaaro, waa u qalantaa mustaqbalka fog. Marka la gaaro 2020, waxaad lacag badan ku samayn doontaa suuqgeyn xiriir la leh sidii hore.
Waxaad kor u qaadi kartaa badeecooyinka maaliyadeed adiga oo iska diiwaangelinaya shabakad xiriir la leh. Barnaamijka xiriirinta Clickbank waa mid ka mid ah shabakadaha ugu weyn uguna caansan adduunka oo bixiya kumanaan alaabooyin xiriir la leh. Waxa kale oo aad ku xayeysiin kartaa alaabta mareegahaaga. Markaad is-diiwaangeliso, waxaad dooran kartaa shirkado badan si aad u xayeysiiso. Haddii aad awoodid inaad samayso muuqaal guul leh, waxaad yeelan doontaa daawadayaal aad u badan.
Dhisidda dad daacad ah
Abuurayaal badan oo YouTube ah ayaan si buuxda uga faa’iidaysan tabka bulshada ee kanaalkooda. Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogeysiiso macaamiisheeda fiidiyowyada cusub, dhajinta cusboonaysiinta, oo aad la falgasho dhagaystayaashaada. Xusuusnow in taageerayaashaada YouTube ay yihiin dhegaystayaal la qabtay. Hubi inaad la shaqeyso iyaga oo bixi waxyaabo cusub si joogto ah. Markaad sidaas samayso, waxaad si dhakhso leh u dhisi doontaa taageerayaal daacad ah. Waa kuwan siyaabo aad ku kordhin karto daacadnimada macaamiishaada.
Ku dhaji warar cusub oo shakhsi ah. Haddii aad dhejiso shay gaar ah, isticmaal tab bulshada si aad u ogeysiiso macaamiishaada inay ogaadaan. Waxaad sidoo kale dhejin kartaa muuqaal qarsoodi ah iyo warar kale oo aan rasmi ahayn. Haddii qof ku qanco faallooyinkaaga, waxaa lagu ogeysiin doonaa inaad ka jawaabtay faallooyinkooda. Kuwani waa qaar ka mid ah siyaabaha lagu dhisayo YouTube daacad ah oo soo socda. Xasuusnoow inaad mar walba cusboonaysiin karto macaamiishaada wakhti kasta waxayna ku farxi doonaan inaad halkaas u joogto inaad ka jawaabto su’aalahooda!
Isticmaal ereyada muhiimka ah ee khuseeya Matoorka raadinta YouTube waa mid aad u casrisan. Dadku waxay u isticmaalaan inay helaan nuxurka khuseeya danahooda. Doorashada ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato dhagaystayaashaada. Haddii aad isku dayayso inaad ka iibiso alaabtaada iyo adeegyadaada dad badan, iska hubi inaad isticmaasho ereyada muhiimka ah ee soo jiidan doona dhagaystayaasha aad beegsanayso. Sida ugu wanaagsan ee tan loo sameeyo waa in aad doorato meel aad xiisaynayso.
Hubi inaad ku dhiirigeliso daawadayaashaada inay tallaabo qaadaan ka dib markay arkaan fiidyahaaga. Waxaad waydiisan kartaa inay soo booqdaan degelkaaga, ku biiraan liiska iimaylkaaga, la wadaagaan xidhiidhka fiidyaha, wax iibsadaan, ama wax ku tabarucaan. Si aad fiidiyowyada YouTube-kaaga uga dhigto kuwo ka sii xoog badan, waxaad qaban kartaa tartamo oo waxaad abaal-marin siin kartaa kuwa qaaday tallaabo ku salaysan muuqaallada aad soo dhejiso. Kuwani waxay kaa caawin karaan inaad hesho daawadayaasha daacadda ah.
Isticmaalka sawirada kaydka ah qalab xayeysiis ahaan
Talaabada ugu horeysa ee samaynta fiidiyoowga YouTube ee guuleysta waa in la doorto niche leh darajada raadinta sare. Markaad doorato niche, waxaad u baahan doontaa inaad u fiicnaato fiidiyowyadaada SEO oo aad sameyso sawir gacmeedyo soo jiidasho leh. Tan, waxaad isticmaali kartaa qalabka sida Canva. Markaad abuurto thumbnail soo jiidasho leh, waxaad u baahan doontaa inaad doorato sawirka saamiga. Sawirada kaydka ah waa nooc muuqaal ah oo inta badan loo isticmaalo wax soo saarka waaweyn. Waxaad wax ka beddeli kartaa sawirka saamiyada si aad lacag u samayso adoon abuurin fiidiyowyadaada. Hal goob oo leh muuqaal tayo sare leh waxaa ka mid ah Artgrid.
Markaad doorato mawduucaaga, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho sawirada kaydka ah ee kordhin kara qiimeyntaada raadinta. Sawirada kaydka ahi waxay noqon karaan qalab xayaysiis heersare ah, haddii ay ka caawiso dadka inay bartaan xirfado cusub oo ay horumariyaan noloshooda. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad xasuusataa inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee khuseeya mawduucaaga. Haddii aad dooratay sawirka saamiyada, hubi inaad ku darto qoraallo dhow. Sidan, YouTube waxay qaadan doontaa ereyadan muhiimka ah.
Talaabada xigta waa in la helo habab aad lacag uga samayn karto fiidyahaaga. YouTube waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay lacag sameeyaan iyagoo ku daraya xayaysiisyada fiidiyowyadooda. Madalku waxa kale oo ay bixisaa kanaalo qaali ah iyo kirooyin filim. YouTube Music iyo YouTube Premium waa laba ka mid ah adeegyada badan ee aad isticmaali karto si aad lacag badan u hesho. Fiidiyowyada dhiirigelinta ah waa hab fiican oo dakhli looga soo saaro YouTube. Waxaad isticmaali kartaa xigashooyin dhiirigelin ah si aad ugu qanciso daawadayaasha inay ku biiraan kanaalkaaga.
Kahor intaadan bilaabin inaad lacag ka samayso YouTube, waxaad u baahan tahay inaad maal gashato qalabka fiidiyowga. Waxaad kiraysan kartaa ama iibsan kartaa qalabka tafatirka fiidyaha ama waxaad kiraysan kartaa khabiir si uu kaaga caawiyo abuurista muuqaal. Doorashada qalabku waxay kuxirantahay miisaaniyadaada, wakhtiga, iyo qadarka nuxurka aad rabto inaad abuurto. Haddii aad qorsheyneyso inaad sameyso vlogs toddobaadle ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho qalabka xafiiskaaga. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad abuurto ololeyaal hal mar ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo kor u qaadida alaabtaada ama adeegyadaada, waa inaad qortaa xirfadle.
Abuuritaanka muuqaal gaaban oo dhiirigelinaya
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lacag looga samayn karo YouTube, mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican waa iyada oo loo marayo barnaamijka lammaanaha. Waxaad isticmaali kartaa Patreon, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ka qaado macaamiisha lacag yar si aad u hesho fiidiyowyadaada. Waxa kale oo aad samayn kartaa olole maal-galin mashruuc-ku-salaysan Indiegogo, Kickstarter, ama GoFundMe. Waa inaad fahantaa saamaynta cashuurta ee la xidhiidha hab kasta ka hor intaanad dhaqan gelin.
Mid ka mid ah tusaalaha muuqaalka gaaban ee dhiirigelinta guusha leh waa kan ay abuurtay Cover Media, taas oo dadka bara sida loo doorto ubaxyada ugu fiican ee munaasabad kasta. Tusaale kale waa muuqaal laga soo qaaday Shepherd iyo Wedderburn, oo ah shirkad sharci ganacsi oo sare ku taal Scotland. Fiidiyowyadu waxay ku dhiirigeliyaan shaqaalahooda inay noqdaan kuwa ugu wanaagsan beerahooda, iyagoo muujinaya kartida caalamiga ah ee Scotland. Fiidiyowyadan qaab-gaaban waxay dhalin karaan dakhli badan.
Qaabka muuqaalka gaaban ee YouTube wuxuu la mid yahay fiidiyowyada caanka ah ee TikTok. Dad badan ayaa sameeya cajaladahaan iyagoo isticmaalaya taleefoonadooda casriga ah si ay u muujiyaan xirfadahooda ciyaaraha fudud ama bandhigyada hal-abuurka ah ee alaabta. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee gaaban ayaa muujinaya qofka oo afaysanaya mindi. Fiidiyowgu wuxuu leeyahay malaayiin aragtiyo ah, YouTube-kuna wuxuu qorsheynayaa inuu daabaco Warbixinta Gaaban bishii kasta. Waxaad samayn kartaa muuqaal gaaban oo baraya dadka kale sida ay u afaystaan ​​mindiyaha oo ay lacag uga helaan.
Habka kale ee lacag looga sameeyo YouTube waa iyada oo la soo bandhigo xayeysiisyada. YouTube waxay ka shaqaynaysaa iibinta xayaysiisyada iyada oo loo marayo Shorts, laakiin waxay u baahan tahay inay soo jiidato xayaysiiyayaasha. Si loo soo jiito xayaysiiyayaasha, YouTube waxa ay sanduuqa Shorts ku beertay $100 milyan. Hubi in dharkaaga gaaban uu yahay mid gaaban oo soo jiidasho leh, oo leh sheeko xiiso leh iyo cinwaan. Waa inaad sidoo kale ku dartaa xiriiriyaha fiidyahaaga, si daawadayaasha ay si fudud ugu heli karaan.
Isticmaalka bogga soo degista fiidiyowga
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee ganacsigaaga loogu suuqgeeyo YouTube waa inaad abuurto muuqaallo dhiirigelin leh. Haddii aad raadinayso hab cusub oo aad lacag ku samayso ama aad rabto inaad dhiirigeliso dadka kale u faafiso, fiidiyowyadani waa hab fiican oo lagu bilaabo. Xitaa waxaad ku xidhi kartaa badeecada fiidiyowyadaada oo waxaad geli kartaa markhaatiyaal. Malaayiin fiidiyow ayaa ku jira YouTube waana inaad ka dhexmuuqataa. Si tan loo sameeyo, waxaad samayn kartaa shaashad dhamaadka ah oo bixisa macluumaadka la xidhiidha iyo wicitaanka ficilka.
Abuuritaanka tartamo waa hab fiican oo aad naftaada iyo shirkaddaadaba ugu heli karto. Abuur tartan abaal-marin u ah daawadayaasha daawashada fiidyahaaga. Tartanku waa inuu noqdaa mid madadaalo leh, abaalgudkuna waa inuu ahaadaa mid wanaagsan. U yeel xaalad guul-guul ah adiga iyo tartamayaashaada labadaba. Ka dib oo dhan, yaa aan rabin in uu ku guuleysto lacag? Talada ugu weyn ee guushu waa inaad diirada saarto oo aad habaysan tahay. Samee hal muuqaal maalintii oo ku saabsan hal mowduuc.
Xayeysiisyada YouTube waa hab fiican oo lagu kaco kanaalkaaga. YouTube waxa ay leedahay dhawr nooc oo xayaysiis ah oo laga xusho. Waxaad dooran kartaa inaad ku xayeysiiso CPM, CPV, ama CPC. Lacagta YouTube badanaa waa mid hoose, laakiin haddii fiidiyowyadaada ay daawadaan dad badan, waxaad heli kartaa lacag badan. Waxaadna lacag ka samayn kartaa ilo kale, sidoo kale. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo fiidyahaaga YouTube waa inaad iska diiwaan geliso barnaamijyada xiriirka la leh. Waxaad kor u qaadi kartaa alaabtooda sharaxaaddaada fiidiyooga waxaadna kasban kartaa guddi iib kasta.
Markaad abuurto fiidiyowyadaada, waxaad u baahan tahay inaad kor u qaaddo. Tani waxay ka dhigan tahay isticmaalka warbaahinta bulshada, wacyigelinta iimaylka, iyo ku wadaagida kanaalada kale. YouTube ayaa samayn doonta inta soo hadhay marka fiidyahaaga la hagaajiyo. Kaliya xasuuso inaad maskaxda ku hayso in riixitaanka ugu horreeya uu yahay waxa kaliya ee ay qaadato! Marka dadku arkaan fiidiyowyadaada, waxay rabaan inay daawadaan. Hubi in loo hagaajiyay bogga soo degaya fiidiyowga!
Published by okhit
View all posts by okhit
Prev Samee 50$ digital marketing ?
Next Ganacsiga internetka
7 Replies to “How to Make $5000 Monthly Making Videos on YouTube”
Abdiraxiin abdikariim Abdullahi says:
war waxaan waan fahmelahay bro wax iishk
Magacaga Samatar says:
Asc wllka waxan maifahansiisid
I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I’m satisfied to find numerous helpful information here within the put up, we want develop extra